पोखरामा अब डिजिटल प्रतीक्षालय — samadhannews.com
पोखरामा अब डिजिटल प्रतीक्षालय
पोखराका विभिन्न स्थानमा बनाइएका डिजिटल यात्रु बसप्रतीक्षालय बुधबार उद्घाटन गरिएको छ ।पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले प्रतीक्षालय उद्घाटन गरेका हुन् ।
महानगरले आकृति एड्भर्टाइजिङसँगको ‘साझेदारी–निजी अवधारणा अन्तर्गत’ प्रतीक्षालयको निर्माण गरेको हो । मेयर मानबहादुर जिसीले प्रतीक्षालयको उद्घाटन गर्दै पोखरालाई स्मार्ट बनाउन डिजिटल यात्रु बस प्रतीक्षालयको निर्माण थालिएको बताए ।
महानगरलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आफू लागि परेको उनले जनाए । ‘स्मार्ट सिटी बनाउन पोखरालाई प्रविधिमैत्री बनाइन्छ, त्यसकै पहिलो कदम प्रतीक्षालय हो,’ उनले भने ।
उनले भने, ‘प्रतीक्षालय अझै तयार भइसकेको छैन । प्रतीक्षालयमा बसेर कहाँ कति नम्बरको बस जान्छ ? कति बेला जान्छ ? भन्ने जानकारी दिने यन्त्रको जडान गर्न बाँकी नै छ ।’
जिसीले महानगरलाई वैज्ञानिक, सस्तो र सुलभ तरिकाले अघि बढाउन महानगर क्षेत्र भित्रका सबै मुख्यमुख्य चोकमाडिजिटल प्रतीक्षालयको निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सबैलाई गौरव गर्न लायक महानगर बनाउन हामी लागि परेका छौं,’ उनले थपे, ‘कसैलाई भेदभावपूर्ण अवस्था आउने छैन ।’
प्रदेश सभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले डिजिटल प्रविधि पोखराको गहना हुने बताए । यातायातलाई सुविधायुक्त र व्यवस्थित बनाउन ट्राफिक लाइट र सिसिटिभी क्यामेराको व्यवस्था गनुपर्ने माग राखे । प्रदेश सभा सदस्य मीना गुरुङले निजी क्षेत्रर महानगरले समन्वय गरेर उदाहरणीय काम गरेको बताइन् ।
‘दुबै क्षेत्रको सहकार्यले नयाँ शैली र तरिकाको सुरुआत भएको छ,’ उनले भनिन् । प्रतीक्षालयको निर्माण पछिपनि उचित रुपले प्रयोगमा आउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बताए ।
‘प्रतीक्षालयको निर्माण पछि विज्ञापन राख्न मात्र काम नहोस्,’ उनले भने । प्रतीक्षालयको निर्माण पश्चात पनि महानगरले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्ण केसीले महानगरले बाहिर पनि राम्रो सूचना प्रवाह हुने कार्यको थालनी गरेको बताए ।उनलेपोखरा लालपूर्जा र नागरिकता भएकाको ठाउँ नभएकाले सबै तरिकाबाट व्यवस्थित गर्दै जान आग्रह गरे ।
‘डिजिटल प्रतीक्षालय एकदम राम्रो अवधारणा हो ।अब सबै ठाउँमा बनाउने प्रेरणा मिलोस्,’ उनले भने । बाहिरका पर्यटकले स्मार्ट हो या होइन भन्ने कुरा यातायात सुविधाबाट नै थाहा हुने भएकाले त्यसैमा ध्यान दिएको पोखराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘पोखरालाई आकर्षक, सुन्दर बनाउन विभिन्न आयाम मध्ये यो पनि एक हो ,’ उनले थपे, ‘यसपछि अन्य काम क्रमशः गर्दै जानेछौं ।’
पोखराबासीले देखेको स्मार्ट सिटीको पहिलो सुरुवात डिजिटल यात्रुबस प्रतिक्षालयबाट सुरु भएको आकृति एड्भर्टाइजिङका अध्यक्ष मनोज चौहानले बताए । अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि डिजिटल सहर सम्भव भएको र त्यसको लागि आफूहरु सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
सबै समस्या हल गर्न आग्रह
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले प्रतीक्षालयको निर्माणले मात्रै स्मार्ट सहर नबन्ने बताएका छन् । महानगर क्षेत्र भित्र रहेका बिजुली पोलमा रहेका तार, बढ्दो ट्राफिक समस्या, अव्यवस्थित होर्डिङबोर्ड लगायतका समस्या समाधान गर्न उनीहरुले आग्रह गरे ।
सबै जनताका मागलाई पूरा गर्न नसके पनि कम्तिमा सम्बोधन गर्न नेपाली कांगे्रसका कास्की सभापति कृष्ण केसीले महानगरलाई आग्रह गरे । ‘हाम्रो ठाउँको विकास र प्रगति भइरहेको छ भन्ने जनतालाई अनुभूति दिलाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
महानगरमा जनप्रतिनिधि आएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि सरोकारवालाले उल्लेखनीय काम नगरेको उनको आरोप थियो । उनले भने, ‘यसले जनतालाई महानगरप्रति वितृष्णा जागेको छ ।’
पोखरामा बाटो साँघुरो नभएको तर व्यवस्थित पार्किङको असुविधाका कारण बाहिरका पर्यटकलाई गलत सन्देश जाने सभापति केसीले बताए । ‘ट्राफिक जामको समस्या व्यवस्थापन नै छैन,’ उनले गुनासो पोखे । स्मार्ट सिटी नक्सामा मात्र नभएर महानगरबासीको मस्तिष्कमा आउनुपर्ने उनले बताए ।
स्मार्ट सिटी पोखरा लक्षित भएको र यसमा लेखनाथलाई पनि छुटाउन नहुने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘लेखनाथलाई पोखरासँग मिसिएर गलत गर्यौं कि भन्ने गुनासो नरहोस् ।’ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुल्मीले डिजिटल प्रतीक्षालयले मात्रै सहर व्यवस्थित नहुने बताए ।
‘निश्चित ठाउँमा ओर्लन/चढ्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने पनि हो,’ उनले भने, ‘यात्रु चढ्ने र ओर्लने प्रतीक्षालय नै व्यवस्थित छैन ।’ महानगरलाई सजग र खबरदारी नगरे जनता आफैले दुख पाउने मुल्मीको भनाइ थियो । प्रदेश सभा सदस्य मीना गुरुङले बसपार्क व्यवस्थित गनुपर्ने माग राखिन् ।
सहरमा पार्किङको समस्या धेरै भएकाले घर बनाउँदा अन्डर ग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था गर्न उनले सुझाइन् । प्रदेश सभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले ठूला भवन तथा सपिङमललाई पार्किङ स्थल बनाएर त्यहाँ व्यापार गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।